Isigqoko Sebhodlela Lamakha
Isigqoko Sebhodlela Nebhulashi Lezipho Zozipholi
Ungalilahli ibhodlela lengilazi, sebenzisa iqhinga ukuze uguqule imfucuza ibe umcebo!
Amabhodlela engilazi angenye yezinto ezivame kakhulu esizisebenzisayo.Izikhathi eziningi, siphelelwa amathini ezithelo, izimbiza ze-condiment nokunye. Yiphose kudoti.Ayi ukumosha! Kukhona ukusetshenziswa okuningi kwamabhodlela engilazi. Amabhodlela engilazi anzima kakhulu ukuwohloka ngokwemvelo kunepulasitiki.Ngakho-ke wasebenzise kakhulu...
Izakhi ezinhlanu zomklamo webhodlela lamakha
Manje idizayini yebhodlela le-perfume isinomoya wobuciko ngokwengeziwe, ibhodlela elicwebezelayo njengesiqephu samabhodlela engilazi amahle. Kwabanye abaqoqi, iphunga lephunga lithatha isihlalo esingemuva ekubukekeni okukhangayo okwenza abantu bathandane ekuqaleni kokubona. Ngakho yiziphi izici ze-pe...
Ibhodlela lezimonyo elisele ngemva kokusetshenziswa kwezimonyo lingasetshenziswa kanjani kabusha?
1. Ungathatha amafutha okugcoba umzimba wakho uhambe nawo ebhodleleni likakhilimu wamehlo Ibhodlela le-eye frost liyikhabhinethi evamile, ngakho-ke ungase futhi upakishe isithwathwa samehlo ambalwa lapho ihlobo noma uvikele isithwathwa sesandla ukuze usithwale, i-daub is in the indololwane evame ukuchachamba noma indawo ehlangene, yenza isikhumba sigcine isimo sithambile...
Okunye ukusetshenziswa kwebhodlela lamafutha abalulekile
Uma ungumthandi webhodlela lengilazi, khona-ke ngikholelwa ukuthi ngokuqinisekile uzoba nokuthanda okukhethekile kombala, izitayela ezahlukene zamabhodlela amafutha abalulekile. Ibhodlela elivamile lamafutha abalulekile nalo linomlomo omncane ohlukile ebhodleleni elivamile, okwenza libukeke njengobaba omncane onehea encane...
Uyayazi indlela efanele yokusebenzisa ukhilimu wobuso?
Njengamandla amakhulu okuthambisa nokulungisa, ukhilimu wobuso udlala indima ebalulekile kuyo yonke inqubo yokunakekelwa kwesikhumba. Ikakhulukazi ekwindla nasebusika, isimo sezulu siqala ukubanda futhi somile, isikhumba kulula ukuzwela, ngisho nesikhumba esibomvu, ukunakekelwa kwesikhumba akukwazi ukungazinaki ukusetshenziswa kwekhilimu. Manje 8...
Indlela yokulungisa umlomo wombhobho we-perfume
Abantu abaningi bathanda amakha, i-perfume enhle ingagqamisa ukukhanga komuntu siqu, yingakho amakha ethandwa kakhulu phakathi kwabantu. Amakha asetshenziswa ngokungafanele noma asetshenziswa njalo, umlomo wombhobho ungabonakala uyinkinga, ungawulungisa kanjani? Ake sithole. Ungawalungisa kanjani amakha...
Ukusetshenziswa kabusha kwamabhodlela eziqholo
Ngokuvamile sithenga amakha emakethe, ibhodlela selicishe livalwe, kodwa abangani abaningi bacabanga ukuthi umklamo webhodlela lamakha uthambile, ufuna ukuphinda usetshenziswe. Ngakho-ke ungavula kanjani ibhodlela lamakha? Nawa amathiphu ambalwa. Uligcwalisa kanjani ibhodlela ngamakha? Okokuqala, lungisa ibhodlela lamakha elingenalutho kanye...
Ukukhethwa kwamakha kwabesifazane
Khetha ukuthi hlobo luni lwamakha, kodwa futhi kuncike ekutheni hlobo luni lwendawo kanye nesenzakalo. Khetha amakha afanele, kuwulwazi ngokuphelele, ake sibone ukuthi uhlakaniphe kangakanani ukukhetha isiqholo esivumelana nawe. 1. Khetha ngokuvumelana nesikhathi sephunga lamakha. Uma uyidinga ukuze uyisebenzele at lea...
Ukusebenza kahle kanye nomsebenzi wamafutha abalulekile e-lavender
Amafutha abalulekile ayinto ebalulekile ekuphileni kwansuku zonke kwabesifazane. Amafutha abalulekile ngumkhiqizo wobuhle othandwa kakhulu kwabesifazane. Umphumela womlingo wamafutha abalulekile e-lavender ekunyatheliseni ama-acne wamukelwa abesifazane abaningi abahle. Ukusebenza kahle kwamafutha abalulekile e-lavender: 1. Thulisa, khulula ubuhlungu futhi unciphise ...
Izinhlobo nemisebenzi yamafutha abalulekile
Amafutha abalulekile uketshezi olunephunga elimnandi olukhishwe ezimbalini, emaqabungeni, eziqwini, ezimpandeni noma ezithelweni zezitshalo zemvelo. Abantu basebenzisa amasu akhethekile, njenge-meridian point massage noma ukuphefumula okujulile, ukwethula amafutha abalulekile emzimbeni womuntu, okubizwa ngokuthi "i-aromatherapy". Izinhlobo ezintathu ze...
Ungakhetha kanjani amafutha abalulekile?
Ungakhetha kanjani amafutha abalulekile? Amafutha abalulekile ama-flavour ahlanzekile e-distilled akhishwe ezithelweni, izikhumba, amahlumela, amaqabunga noma izimbali zezitshalo. Zisetshenziselwa i-aromatherapy ukukhuthaza isimo sengqondo nempilo yomzimba. Amafutha abalulekile angagcotshwa emzimbeni ngamanzi noma ngezithwali zikawoyela wesisekelo, ahogelwe...
Uyazi ukuthi yini okufanele uyinake lapho usebenzisa i-nail polish?
Uyazi ukuthi yini okufanele uyinake lapho usebenzisa i-nail polish? Uma kuziwa ku-manicure, ngokwemvelo sicabanga ngamafutha e-nail anemibala, akhazimulayo.Kodwa lo mzimba webhodlela elincane, futhi njengombala nokubukeka, kunemfihlakalo enkulu, namuhla ukwabelana ngokunye kokusetshenziswa kwamafutha wezipikili ezinye ezincane ezivamile. ..
Umphathi wezokuthengisa womnyango wamazwe ngamazwe: uJerry Ju
Ucingo:+86 513 82828465